जेठदेखि जेटको उडान
हेक्का राख्नुस्, गत जेठबाट तपाईं हामी जेटमा उडानरत छौँ। विगतमा सानातिना अर्थात् एक पाइलटले चलाउने प्लेनमा यात्रा गर्न अभिशप्त हाम्रा लागि जेट चढ्न पाउनु सुखद् कुरा हो। जेट उडिरहेको छ। तर, यो कुन–कुन हवाई रुट भएर गुज्रन्छ ? अनि यसको गन्तव्य चाहिँ कहाँ हो ? यात्रारत अधिकांशलाइ यसबारे जानकारी छैन। थोरबहुत स्वनामधन्य जानिफकार पनि हिजोआज उल्कै ‘कन्फ्युज्ड’ छन्।
दुई पाइलटको नेतृत्वमा जेट उडिरहेको कुरा सबैलाई थाहा छ। पाइलटसँगसँगै पाइलट दलका सदस्य पनि हुन्छन्। सबैको साझा प्रयत्नले विमान उड्ने हो। हामी यात्रुले पाइलट र उडान दलका सदस्यका वर्तमान मनोदशा बुझ्नु जरुरी छ।
ओली महोदय मुख्य पाइलटको आसनमा हुनुहुन्छ। उहाँको दृष्टिमा जेट बडो शानदार उडिरहेको छ। बेला–बेला बदलिने ‘वेदर’लाई उहाँले ठम्याउन सक्नुभएको छैन। आँधी र हुरीले जेट हल्लिदाँ पनि उहाँलाई हल्लिएजस्तो लाग्दैन। मानौँ, यसरी प्लेन हल्लिनु उहाँका लागि पूर्वी पहाडमा रोटेपिङ हल्लिएजस्तै हो।
मौसमलगायत कारणले समस्या आयो भनेर कसैले भन्यो भने उहाँलाई रिस उठ्छ। कसैले रुट चेन्ज गरौँ, अझ उचाइमा लैजाऔँजस्ता सुझाव दिए भने उहाँलाई मजाक गरेजस्तो लाग्छ। जेटको उडानबाट उहाँ हुनसम्म सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। आफूले उडाएको जेटको विषयलाई लिएर टीकाटिप्पणी हुनु उहाँका लागि घोर अपमान हो।
अर्का पाइलट दाहाल महोदय बडो विचित्र मनोदशामा हुनुहुन्छ। हुन त उहाँ सधैँ विचित्र मनोदशामै हुनुहुन्छ। एक पाइलो अघि र दुई पाईलो पछि उहाँले जीवनभर अभ्यास गर्नुभएको कर्म हो। मूल पाइलटकै आसनमा बस्न खोजिरहनु उहाँको दशकौँको अभ्यासबाट सिर्जित स्वभाव हो। अहिले मूल आसनमा बस्न उहाँलाई देश–काल–परिस्थतिले दिइरहेको छैन।
मुख्य पाइटलको उडान निर्देश पनि उहाँलाई हजम भइरहेको छैन। कुनै प्रतिक्रिया दिइहाल्न पनि उहाँलाई बडो कठिन छ। प्लेन बीचमै ल्यान्ड होस् र आफू मुख्य पाइलटको आसनमा आसीन हुन पाइयोस् भन्ने पर्खाइका साथ उहाँ बडो कष्टले यात्रारत हुनुहुन्छ।
पाइलट दलका मुख्य सदस्य मानिनुहुन्छ, नेपाल महोदय। तर, उहाँ आफैँले भने आफूलाई प्रमुख सदस्यका रूपमा सोच्नसमेत भ्याउनुभएको छैन। प्लेनको उडान र ल्यान्डिङभन्दा पनि कुन पाइलटको फेरो समाउने भन्ने विषय नै उहाँका लागि भारी भइरहेको छ। उडानको विषयमा विमति राख्दाराख्दै पनि ठीकठीकै हो भन्नु उहाँको बाध्यता बनिरहेको छ।
अर्का चालकदल सदस्य हुन्, श्रेष्ठ महोदय। उहाँले सायद एकबारको जुनीमा मुख्य पाइलट बन्न पाइन्छ भन्ने सपना नै देख्न छाड्नुभएको छ। तथापि, उहाँले जेटको चालकदलको सदस्य परित्याग गर्नुभएको छैन। एक पटक सदस्यबाट राजीनामा दिए पनि उहाँ पुनः पदमा बहाल भइसक्नुभएको छ।
गौतम महोदय अर्का चालकदल सदस्य हुन्। उहाँले प्लेन बीचमै ल्यान्ड गरेर आफैँ पाइलट बन्ने भगीरथ प्रयत्न गर्नुभो। तर, उहाँका सबै प्रयास ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भैदिए। उहाँसँग गुनासो र आक्रोश मात्र बाँकी छ। उहाँले डोल्पाको एयरपोर्टमा प्लेन अवतरण गराउन कोसिस गर्नुभो। सम्भव भएन। त्यसपछि पुनः काठमाडौँको एयरपोर्ट नै ताक्नुभो। त्यो पनि खेर गयो। त्यसैले हिजोआज गौतम महोदय मौन हुनुहुन्छ।
जेटको झ्यालबाट हेर्दा अन्य धुमिल दृश्य पनि देखिन्छन्। दुई दशकदेखि नेपाली सत्ता आकाशमा उड्दै आएको अर्काे प्लेन एयरपोर्टमै ग्राउन्डेड भएको छ। चालक दलका क्याप्टेन देउवाज्यू बडो आक्रोशित मुद्रामा देखिनुहुन्छ। चालक दलका अर्का दुई सदस्य पौडेल र कोइरालामा पनि आक्रोशको मात्रा कम छैन। चालामाला हेर्दा यो ग्राउन्डेड प्लने छिट्टै उड्ने छेकछन्द छैन।
जेटको झ्यालबाट हेर्दा थापा काजीको हिन्दू राष्ट्रको ध्वजाधारी ट्वीनटर, विप्लवको विप्लवी ट्वीनटर र भट्टराईको निर्माणाधीन नयाँ ट्वीनटरको आकृति पनि देखिन्छ। थापा काजी ट्वीनटर उडाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहनुभएको छ। तर, उहाँको ट्वीनटरको हाल सन् २०१९ मा पेन्टियम वान कम्युटरको जस्तै भएको छ। उता, विप्लवी ट्वीनटरले मूल एयरपोर्ट नै पक्रिन सकेको छैन।
दूरदराजकै धुले एयरपोर्टमा कुनै दिन जेट बन्ने सपना देखिरहेको छ। भट्टराईको निर्माणाधीन नयाँ ट्वीनटर कस्तो बन्ने हो ? अनुमान गर्न सकिन्न। तर, काठमाडौँ र रसुवाका कारखानामा बन्दै गरेका पाटपुर्जा अरूले नै भोगचलन गर्न थालेपछि नयाँ ट्वीनटरको सफल निर्माण संशयमा परेको छ।
उस्तै–उस्तै आकृति र स्वरूपधारी मध्यम कदका अरू दुई प्लेन पनि जेटको झ्यालबाट देख्न सकिन्छ। एउटा प्नेनमा मूल पाइलट को हो, अत्तोपत्तो हुँदैन। उड्दा एउटा पाइलटले उडाएको प्लेन ल्यान्ड गर्दा अर्कैको हातमा पुगिसकेको हुन्छ। कहिले ठाकुरजी, कहिले महतोजी त कहिले यादवजीहरूको मिलीभगतमा उक्त प्लेन उडिरहेको छ।
जेटमा यात्रारत हामी नेपालीले यस्ता अनकौँ दृश्य देख्न पाइरहन्छौँ। हाम्रो काम भोट हालेर तमाम भइसकेको छ। अब बाँकी चार वर्षभरि हामी रमिते हौँ। आगामी दिनमा पनि रमिता हेरिरहन्छौँ। सिटमा बस्दा बेल्ट बाँध्न चाहिँ नबिर्सौं है ?